မင်းသားကြီးရန်အောင်ရဲ့ မွေးနေ့မှာ (၃) ပေပတ်လည်လောက်ရှိပြီး ကိုယ်တိုင်သေသေချာချာလုပ်ထားတဲ့ မွေးနေ့ကိတ်ကြီးနဲ့အတူ မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးလိုက်တဲ့ ပိုင်ဇေရဲထွန်းရဲ့ ဇနီးချောလေး ဇင်သဲနိုင်.. – Shwewiki.com
မင်းသားကြီးရန်အောင်ရဲ့ မွေးနေ့မှာ (၃) ပေပတ်လည်လောက်ရှိပြီး ကိုယ်တိုင်သေသေချာချာလုပ်ထားတဲ့ မွေးနေ့ကိတ်ကြီးနဲ့အတူ မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးလိုက်တဲ့ ပိုင်ဇေရဲထွန်းရဲ့ ဇနီးချောလေး ဇင်သဲနိုင်..ရဲ့အကြောင်းလေးကို ပရိတ်သတ်တွေအတွက် ပြန်လည် မျှ‌ေ၀လိုက်ပါတယ်…
ဒီဇင်ဘာ(၁၄)ရက်နေ့လေးကတော့ ပရိသတ်တွေ ရဲ့အချစ်တော်ဖြစ်သလို ကျရာဇာတ်ရုပ်တွေမှာ သရုပ်ဆောင်ပီပြင်လွန်းတဲ့ အကယ်ဒမီမင်းသားကြီး ရန်အောင်ရဲ့ အသက်(၅၄)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ရက်မြတ်လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်..။
ကိုရန်လေးလို့ အားလုံးက ရင်းရင်း နှီးနှီးခေါ်ကြတဲ့ မင်းသားကြီးရန်အောင်ကတော့ ငယ်စဉ်ကတည်းက ယနေ့အချိန်ထိ ပရိသတ်တွေရဲ့တစ်ခဲနက်အားပေးဝန်းရံမှုတွေကို ရရှိထားပြီး ဇာတ်ကားပေါင်းများစွာရိုက်ကူးကာ ထက်ဆင့်အကယ်ဒမီအနုပညာရှင်အဖြစ်အောင်မြင်စွာ ရပ်တည်နေသူပါပဲ..။
ကိုရန်လေးကတော့ သူ့ရဲ့မွေးနေ့လေးမှာ ကိုဗစ် ကုသတိုက်ဖျက်ရေးအတွက် ဧရာဝတီစင်တာမှာ အလှူငွေတွေလှုဒါန်းကုသိုလ်ယူခဲ့သလို ပရိသတ်တွေနဲ့ မိတ်ဆွေတွေကလည်း မွေးနေ့တောင်းစကားလေးတွေပြောထားကြတာလည်း တွေ့ရပါတယ်နော်..။ အခုတစ်ခါမှာလည်း ပိုင်ဇေရဲထွန်းရဲ့ ချစ်ဇနီးချောလေးဖြစ်တဲ့ ဇင်သဲနိုင်ကလည်း ကိုရန်လေးအတွက် ကိုရန်လေးရဲ့ပုံတူနဲ့ အနုစိတ်ဆန်တဲ့ ၃ပေကိတ်ကြီးကို
ကိုယ်တိုင်လုပ်ပြီး မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပြန်ပါတယ်နော်..။ “ဂုဏ်ယူစွာဖြင့် အနုစိတ်ဖန်တီးဖြစ်သော ၃ပေကိတ်ကြီး Happy Birthday Ako My Taste by THAE. .” ဆိုပြီး ကိုရန်လေးအတွက် မွေးနေ့ကိတ်လေး ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးပေးထား တဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို မျှဝေထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်..။
စားရက်စရာ မရှိလောက်အောင်ကို လက်ရာမြောက်လွန်းတဲ့ ကိုရန်လေးအတွက် ဇင်သဲနိုင်ရဲ့မွေးနေ့ကိတ်ပုံရိပ်လေးတွေကို ပရိသတ်တွေအားလုံးကလည်း သဘောကျနေကြတာ တွေ့ရပါတယ်နော်..။
ဒီဇင္ဘာ(၁၄)ရက္ေန႔ေလးကေတာ့ ပရိသတ္ေတြ ရဲ႕အခ်စ္ေတာ္ျဖစ္သလို က်ရာဇာတ္႐ုပ္ေတြမွာ သ႐ုပ္ေဆာင္ပီျပင္လြန္းတဲ့ အကယ္ဒမီမင္းသားႀကီး ရန္ေအာင္ရဲ႕ အသက္(၅၄)ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔ရက္ျမတ္ေလးပဲ ျဖစ္ပါတယ္ေနာ္..။
ကိုရန္ေလးလို႔ အားလုံးက ရင္းရင္း ႏွီးႏွီးေခၚၾကတဲ့ မင္းသားႀကီးရန္ေအာင္ကေတာ့ ငယ္စဥ္ကတည္းက ယေန႔အခ်ိန္ထိ ပရိသတ္ေတြရဲ႕တစ္ခဲနက္အားေပးဝန္းရံမႈေတြကို ရရွိထားၿပီး ဇာတ္ကားေပါင္းမ်ားစြာ႐ိုက္ကူးကာ ထက္ဆင့္အကယ္ဒမီအႏုပညာရွင္အျဖစ္ေအာင္ျမင္စြာ ရပ္တည္ေနသူပါပဲ..။
ကိုရန္ေလးကေတာ့ သူ႔ရဲ႕ေမြးေန႔ေလးမွာ ကိုဗစ္ ကုသတိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ ဧရာဝတီစင္တာမွာ အလႉေငြေတြလႈဒါန္းကုသိုလ္ယူခဲ့သလို ပရိသတ္ေတြနဲ႔ မိတ္ေဆြေတြကလည္း ေမြးေန႔ေတာင္းစကားေလးေတြေျပာထားၾကတာလည္း ေတြ႕ရပါတယ္ေနာ္..။ အခုတစ္ခါမွာလည္း ပိုင္ေဇရဲထြန္းရဲ႕ ခ်စ္ဇနီးေခ်ာေလးျဖစ္တဲ့ ဇင္သဲႏိုင္ကလည္း ကိုရန္ေလးအတြက္ ကိုရန္ေလးရဲ႕ပုံတူနဲ႔ အႏုစိတ္ဆန္တဲ့ ၃ေပကိတ္ႀကီးကို
ကိုယ္တိုင္လုပ္ၿပီး ေမြးေန႔ဆုေတာင္းေပးလိုက္ျပန္ပါတယ္ေနာ္..။ “ဂုဏ္ယူစြာျဖင့္ အႏုစိတ္ဖန္တီးျဖစ္ေသာ ၃ေပကိတ္ႀကီး Happy Birthday Ako My Taste by THAE. .” ဆိုၿပီး ကိုရန္ေလးအတြက္ ေမြးေန႔ကိတ္ေလး ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးေပးထား တဲ့ ပုံရိပ္ေလးေတြကို မွ်ေဝထားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္ေနာ္..။
စားရက္စရာ မရွိေလာက္ေအာင္ကို လက္ရာေျမာက္လြန္းတဲ့ ကိုရန္ေလးအတြက္ ဇင္သဲႏိုင္ရဲ႕ေမြးေန႔ကိတ္ပုံရိပ္ေလးေတြကို ပရိသတ္ေတြအားလုံးကလည္း သေဘာက်ေနၾကတာ ေတြ႕ရပါတယ္ေနာ္..။